Madaxweynaha Turkiga oo la filayo inuu Jimcaha booqdo Muqdisho & amaanka oo la adkeeyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Turkiga oo la filayo inuu Jimcaha booqdo Muqdisho & amaanka oo la adkeeyey
21st January 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyib Erdogan ayaa la filayaa inuu maalinta Jimcaha ah ee 23-kaq bishaan Janaayo 2015 booqasho ku yimaado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, isagoo sidoo kalana booqanaya dalal kale oo Afrikaan ah.
Recep Erdogan ayaa maalinta berri ah oo Khamiis ah booqasho ku tagaya xarunta Itoobiya ee Addis Ababa, halkaasoo uu kula kulmi doono madaxweynaha dalka Itoobiya, Mulatu Teshome iyo ra’iisul wasaaraha dalkaas, Hailemariam Desalegn.
Wafdiga Turkiga ah ayaa waxaa ka mid ah tiro ka mid ah golaha wasiirrada dalkaas, xildhibaanno iyo ganacsato, iyagoo dalka Itoobiya kala hadli doona arrimaha ganacsiga iyo xiriirka labada dal.
Sidoo kale, Erdogan ayaa tagi doona dalka Jabuuti oo uu kula kulmi doono madaxweyne, Ismaaciil Cumar Geelle, iyadoo Erdogan uu safarkiisa kusoo xiri doono Soomaaliya oo uu imaan doono Jimcaha.
Erdogan ayaa booqashadiisa Jimcaha uu ku imaanayo Soomaaliya ay noqon doontaa tii labaad, kaddib markii uu sannadkii 2011-kii uu yimid Muqdisho, xiligaa oo uu ahaa ra’iisul wasaare, iyadoo Soomaaliya ay ka jirtay macluul daran oo ka dhalatay abaaro ku dhuftay inta badan gobollada Soomaaliya.
Amaanka caasimadda Soomaaliya ayaa aad loo adkeeyey 3-dii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana la xiray wadooyinka ku dhow madaxtooyada.
Maalinta Jimcaha ah waxaa hakad la geliyey duulimaadyada shirkadaha diyaaradaha ee ganacsiga, waxaana shirkadaha qaar duulimaadyadii Jimcaha ugu hormariyeen berri oo khamiis ah, halka kuwa kalana sabtida u dib dhigeen.
Mo Molem:The real goal is the seizure of Saudi oil
Alshabaab oo ku baaqay weeraro laga geysto dalalka Yurub